विवादले निम्त्याउने विनास
नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच फेरि नयाँ विवाद सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा गठन अघि नयाँ सरकार बनाउने कि पछाडि भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ । विवादका कारण दलहरुबीच ध्रुवीकरण देखिएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल कांग्रेस यही सरकारको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने हो भनिरहेका छन् भने एमाले लगायतका बाम गठबन्धन भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग राष्ट्रियसभाको कुनै सम्वन्ध नरहेकाले नयाँ जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
दलहरुबीचमा देखिएको विवाद र अडानले फेरि पनि जनतालाई निरास बनाउने काम भएको छ । जनअपेक्षा अनुसार नेपाली जनताको चाहनामाथि खेलवाड भएको छ । यो कदापि उचित हुन सक्दैन । नेपाली जनताको शान्ति, विकास र समृद्धिको चाहनालाई रोक्ने दुस्प्रयास कोही कतैबाट हुनु राम्रो होइन ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अरु कुनै निर्वाचनलाई देखाएर नयाँ सरकार गठनलाई रोक्ने काम न्यायसंगत हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न एउटा ऐन अन्तर्गत भएको छ भने सोही अन्तर्गत नै अघि बढ्ने काम हुनु पर्दछ । त्यसो हुन नसक्ने हो भने भविष्यमा अनावश्यक बखेडा निम्तिने सम्भावना छ । यस्तो परिस्थितिमा दलका नेताहरुले आआफ्ना अडानलाई त्यागेर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु पर्दछ ।
सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्ति नयाँ होइन । अझ नेपाली कांग्रेसका लागि त सत्ता भन्ने कुरा माछा र पानी जस्तै भइसकेको छ । जसरी पानी विना माछा बाँच्न सक्दैन । कांग्रेस सत्ताविना रहन सक्दैन । त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अहिले केही दिन र महिनाका लागि भएपनि सत्तामा बसिरहन कांग्रेस चाहिरहेको छ । यो चाहनाले कांग्रेसलाई फाइदा भएकै छैन । यो राजनीतिक अड्को थापेर सत्ता लम्ब्याउने बाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । यसले कांग्रेसको छवि माथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो राम्रो काम होइन ।
दलहरुबीचमा देखिएका सानातिना विवादलाई सतहसम्म आउन नदिनु नै उचित हुन्छ । अहिले आफ्नो पक्षमा मत प्राप्त नभएपछि कांग्रेसले तत्काल राजीनामा दिएर राजनीतिक नैतिकता देखाउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगर्दा कांग्रेसप्रतिको जनविश्वास बढ्नुको सट्टा थप घट्नेछ । यसले कांग्रेसको उचाईलाई पक्कै पनि बढाएको छैन । यसले राजनीतक छविमा धमिलोपना ल्याएकै छ । त्यसैले पनि राजनीतिक विवाद गर्दै सत्तामा बसिरहनु कांग्रेसको लोकतान्त्रिक नैतिकताभित्र पर्ने विषय नै होइन । यो वा त्यो बहानामा सत्तामा बसेर विवाद गर्दा विनासतिर उन्मुख हुने करालाई हेक्का राख्नु पर्दछ ।
चुनावी परिणाम पुरै आइसकेको छैन, नेपाली राजनीतिक पण्डितहरुले भविश्यवाणी सुरु गरेका छन्, बामगठबन्धनको भविश्यका बारेमा । पण्डितहरु भविश्यवाणी मात्र गर्छन्, तर नेपालमा बाम गठबन्धनको अन्त्यका लागि लविङहरु पनि चलिरहेको छ । चुनावमा हार व्योहोरेको कांग्रेसदेखि दक्षिणका छिमेकीसम्मले एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटाउनका लागि हदैसम्मको चलखेल सुरु गरेको छ ।
पाँच वर्षको ग्यारेन्टी
धेरैले सोचेका थिए, कांग्रेसले चुनावमा हारेपछि आफुलाई रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभ्याउने छन् र अगामी चुनावमा बहुमतको लागि तयारी गर्नेछन् । अझ यसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा बढी नै संबेदनशील हुने छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसले त्यो बाटो तय गरेनन् । मत परिणाम पुरा नआउँदै पुनः आफुलाई सत्तामा पुृर्याउने कार्यका लागि लविङ सुरु गरे । एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटाउने र उनीहरुको संभावित एकतालाई रोक्ने तयारी र कोशिस सुरु गरेका छन् । यसले देउवा र कांग्रेसले आफ्नो हार स्वीकार गरेको देखिएन । नत अर्को पटकको लागि जनमतको प्रतिक्षा गर्ने संकेत नै देखाए ।
सुरुमै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे । त्यो पनि आलोपालो वा केही समयको लागि हो र ? पाँच बर्षका लागि । यसअघि यस्ता सत्ताका विषयलाई ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भन्दै अलिखित बनाउने गर्दथे । तर, यस पटक देउवाले अफर गरे, लिखितै गरौंला ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, माओवादी अध्यक्ष दाहाल उनीहरुकै भाषामा चलयमान छन् र अरुको बुझाइमा सत्ताका लोभी छन् । अस्थिर छन् र सत्ता र शक्तिका लागि जे सुकै गर्छन् । कांग्रेसलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन । उनको त्यही अस्थिर र सत्तालिप्सलाई क्यास गर्दै दाहाललाई पाँच बर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको अफर गरियो । यसले एक चोटीलाई फेरी नेपाली राजनीति गर्मायो । दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको संवादमा विराम लाग्यो । अनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो गृहनगर चितवन बसाई लम्ब्यायो । सायद दाहालले यसले आफु र पार्टीलाई दिने फाइदा र वेफाइदाका बारेमा सोचे होलान् । अहिले काठमाडौं फर्केर फेरी ओलीसंगै मञ्चहरुमा देखा पर्न थालेका छन् । भन्न थालेका छन्, सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता । कांग्रेसको प्रयास यतिमा सिमित छैन । उसको प्रयास जारी छ । आइतार मात्र कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले आफ्नो ध्यान दाहाललाई तानेर बाम गठबन्धनलाई तत्कालका लागि भंग गर्नु हो भनेर नवलपरासीमा भाषणै गरे । दृष्य र अदृष्य रुपमा अहिले माओवादी नेतृत्वलाई लोभ्याउने र तर्साउने काम कांग्रेसले गरिरहेको छ । त्यसले एमालेसंगको वार्तामा माओवादीलाई केही हदसम्म बार्गेनिंग गर्ने अवसर पनि दिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा माने पनि नमाने पनि भारतीय प्रभाव र चासो कायमै छ । त्यसो हुन हुन्नथ्यो एउटा कुरा हो, तर यथार्थ भनेको भारतको प्रभाव कायमै छ । बाम गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत भारतको लागि टाउको दुखाई बनेको यथार्थ पनि हो । नाकाबन्दीको समयदेखि खरो भारत विरोधीको रुपमा परिचय बनाएका एमाले अध्यक्ष ओली यो गठबन्धनको नेता मात्र होइन, भावी प्रधानमन्त्री पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा भारतले असहज अनुभव गर्नु स्वभाविक हो । त्यसैले बाम गठबन्धन टुटाउनका लागि उसले पनि आफ्नो दूतहरुको परिचालन गरिसकेको छ । राजदूतले नेताहरुलाई एकसरो भेटिसकेका छन् । तर, त्यसले मात्र होइन, भारतले आफ्नो गुप्तचरी संयन्त्रलाई परिचालन गरिसकेको छ । विशेष गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहालको निगरानी र उसलाई प्रभावित बनाउने कोशिस जारी नै छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालका विगतदेखि बर्तमानसम्मका सबै गतिविधिहरु दक्षिणी मित्रको गुप्तचरी संस्थाबाट लुकेको, छिपेको विषय होइन, दाहालले पटकपटक उनीहरुको सहयोग लिएको र उपयोग गरेको उदाहारणहरु छन् । त्यसैले पनि उनको सबै छिद्रहरुको थाहा भएको, उनको बैध अबैध धन्दाहरुको जानकार त्यो सयन्त्र परिचालित हुनुले पनि आशंकाहरु पैदा भएको छ, कतै दाहालले बाम गठबन्धनलाई त्याग्ने त होइन । जानकारहरु भन्छन्, तिनीहरुलाई राम्रोरी थाहा छ, कुन बटन दवाउँदा दाहाल कत घुम्छन् भन्ने कुरा ।
उनीहरुको पनि शैली कांग्रेसकै जस्तो छ । सके फकाउने, नसके तर्साउने । तर, विगत गर्ने भारतीय संयन्त्रको काम र अहिलेको केही फरक देखिएको छ । चुनावपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जितेको बाम गठबन्धनलाई बधाई नदिएपनि चुनावी परिणामको स्वागत गरेका छन् ।
त्यसैगरी विगतमा खुलेआम चलखेल गर्ने भारतीय संयन्त्रहरु अहिले निक्कै सतर्कतासाथ र कुनै हल्लाखल्ला नगरी काम गरिरहेका छन् । विगतमा आफु अनुकुल परिस्थिति नबनेको बेला उच्च अधिकारीहरुलाई दूत बनाएर पठाउने र हल्लाखल्लाका साथ परिस्थितिको विरोध गर्ने, अनि नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो सन्देश सुनाउने काम गर्दथे । तर, यसपाली भारतीय अधिकारीहरुले त्यसो गरेका छैनन् । मोदीले चुनावी परिणामको स्वागत गर्नुपनि यसैको उदाहरण हो । उसले परिणामको विरोध गरेका छैनन्, त्यसले नेपाली जनता भड्किन्छ भन्ने कुराको उनी जानकार छन् । तर, जस्ले जितेको छ, उसलाई बधाई चाही दिएका छैनन्, त्यसमा उनको असन्तुष्टी देखिन्छ । त्यसै गरेर उच्च अधिकारीहरु भन्दा पनि आफ्ना मध्यमस्तरका गुप्तचरी अधिकारीहरु र नेपालमै रहेका आफ्ना दूतहरुलाई परिचालन गरेका छन् । जस्ले गर्दा धेरै हल्ला हुँदैन, मिडियाले चासो राख्दैन । तर, परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छ ।
कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन चाहेन । त्यो उसको कुरा हो । बाम गठबन्धनबाट छुट्याएर माओवादीको नेतृत्वमा आफु सरकारमा जान चाह्यो, त्यो पनि राजनीतिमा अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यति हो, आफु चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालै सरकारमा जाने चाहना राख्नु भन्दापनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको भए जनताले पत्याउने थिए, अलि नैतिक देखिन्थ्यो ।
त्यसैगरेर भारतकै कुरा गर्दा पनि शक्ति मुलुकले निर्बल छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा नखेलेको कहाँ छ र ? राज्य भन्ने चिज नै स्वार्थी छ । छिमेकी र पुरै विश्व आफ्नो अनुकुल भए हुन्थ्यो भन्ने सबैको हुन्छ । त्यसैले दक्षिणको भारतले चलखेल गरेको कुरालाई पनि अनौठो मान्न भएन । उनीहरुले स्वभाविक रुपमा चलखेल गर्छन् । बरु यसबाट जानकार हुनुपर्यो ।
अव कुरा रह्यो आफ्नै । विपक्षीहरु मिलेर आफु विरुद्ध लाग्दा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीति आफुले बनाउनु पर्यो । कसैले फकाउदा र धम्क्याउदा त्यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पुर्याउला भन्ने कुरा आफुले बुझ्नु पर्यो । अहिले सबैको ध्यान माओवादी अध्यक्ष दाहालमा केन्द्रित छ ।
त्यसैगरी निसाना पनि उनै माथि छ । फकाउने पनि उनैलाई हो, तर्साउने पनि उसैलाई हो । यस्तो अवस्थामा दाहालले गर्ने निर्णय नै यसको निक्र्यौल हो । दाहाल फकिन्छन् की थर्किन्छ की भन्ने हो ।
नेपाली उखान छ, आफ्नो थैलीको मुख राम्रोरी नबाँध्ने अनि अरुलाई चोरी बात लगाउने । दाहाल र ओलीले ठिक निर्णय गर्न नसक्ने, जनमतको कदर गर्न नसक्ने । अनि कांग्रेस र भारतले हामीलाई फुटायो, फेरी पनि अल्पमतको सरकार बनाउन बाध्य बनायो, स्थिर सरकार बनाउन दिएन भनेर सरापेर फाइदा हुनेवाला छैन । अर्को पटक जनताले धुलो चटाउने छन् । त्यसैले गम्भीरताका साथ जनतासंग गरेको बाचाहरु सम्झने र मुलुकलाई ही बाटोमा लैजाने जिम्मेवारी सबैभन्दा धेरै दाहालको छ, अनि ओलीको ।
नेपाली जनता, आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हित चाहन्छ भने दाहाल फुर्किन हुँदैन, फकिन हुँदैन अनि थर्किन हुँदैन । पाँच बर्षको प्रधानमन्त्री पदको लालचा देखाइएकै छ । अनि युद्ध अपराधमा हेग पुर्याउनेदेखि अवैध सम्पतिको खोजी गर्नेसम्मको धम्की आएकै होला । अझ ज्यानको धम्कीसमेत आउन सक्छ । तर, त्यसबाट तर्सिन भएन ।
साँच्चि नै उनले मुलुकको बारेमा सोचेका छन् भने एक पटक जनताले स्थिर सरकार र समृद्धिको लागि भनेर दिएको जनमतको कदर गर्नु पर्छ र पाँच बर्ष एमालेसंग पार्टी एकीकरण भएपनि नभएपनि सत्ताको साझेदार बनेर काम गर्नुपर्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आएको आधारमा माओवादीलाई दुत्कार्ने र लल्कार्ने गर्नु हुँदैन । संघीय समाजवादी र राजपासंग मिलेर सरकार बनाउने र माओवादीलाई आफुले भनेको सर्तमा मात्र सरकारमा सहभागी गराउने वा पार्टी एकीकरण गर्ने दुस्प्रयास गर्नु हुँदैन ।
चुनाव अघि उसंग मिलेर जनताका सामु गरेको बाचाहरु सम्झनु पर्दछ । माओवादीलाई पनि सम्मानका साथ मिल्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।